Welding oscillator uphezu kwakho konke okudingekayo ukuze afeze umsebenzi Welding kuyo yonke imikhakha zokukhiqiza. Oscillator ewusizo ngoba ingasetshenziswa kokubili kwezinga lemikhiqizo yezimboni, futhi ekuphileni kwansuku zonke. Lo mshini wezenzo we oscillator uku ukuthungela we arc Welding. Phakathi naleso sikhathi, ngesikhatsi operation ilangabi is aqhubeka stably enikeziwe. Ezisetshenziswa kakhulu iyona oscillator iyunithi uphawu OP-240.
Njengoba Welding lubaluleke ezindaweni eziningi yokukhiqiza kanye umsebenzi wasendlini, le oscillators ngokufunwa uhlale okusezingeni eliphezulu. Kodwa lokho akusho ukuthenga. Oscillator ngezandla zabo ukwenza akuyona ukuthi kunzima. Ukuze wenze lokhu, nje kudingeka izinto ezidingekayo nokulandela izincomo ngezansi.
Made oscillator inverter ngezandla zabo noma ngithenge Kusetshenziswa umshini ngenjongo esitebeleni ukusebenza kwe-Welding arc. Imvamisa 50 Hz ngesikhathi okuzisholo zokusebenza voltage ka 220 V Ngesikhathi okukhiphayo, kungenzeka lezi nemingcele lakhuphuka lafika ku-2500-3000 150000-300000 Hz futhi V, ngokulandelana. Nale oscillator edonsa pulses kuze emashumini ambalwa microseconds. Lezi nemingcele ukusebenza, lapho okusezingeni eliphezulu ifrikhwensi agelezela wesifunda Welding, futhi kubangelwa amandla ohambelana - 250-350 Watts.
Nge izici ezinjalo eyenziwe aluminium oscillator ngezandla zakhe has izici ezihambisana yokukhiqiza Welding noma umsebenzi wokulungisa ekhaya. Ingasetshenziselwa ukukhiqiza Welding aluminiyamu nezinye izinsimbi.
Cabanga izingxenye kagesi oscillator:
inductors ezimbili ikhoyili;
Transformers: elula okusezingeni eliphezulu;
Circuit ehlanganisa capacitor kanye transformer ephezulu imvamisa, edonsa izinhlansi damped.
Kungani sidinga capacitor?
I capacitor kule wesifunda wenza umsebenzi obalulekile ekuvikeleni kwidivaysi bese wenza umsebenzi Welding ukulimala ahlukahlukene kubangelwa ukuchayeka ugesi. Uma kwenzeka ukuwohloka we kagesi wesifunda Ukukhipha kwenzeka ngenxa fuse ekhethekile. Usekhonza njengephayona isici zokuzivikela.
Ukubambisana iyunithi kanye oscillator usebenzisa algorithm elandelayo. Voltage lisetshenzisiwe capacitor ngokusebenzisa transformer. Ngakho ishaja ke. Lapho ligcwaliswe ngokuphelele, capacitor osenyameni zamanje sihamba kuya arrester, kwakhiwa okuyinto kusukela ukuphuka. Phakathi naleso sikhathi, i-wesifunda oscillation is shorted. Le nqubo yonke kubangela kunyakaza isimiso resonance. Kodwa ngokushesha ubole. Lamanje ephezulu imvamisa kuya oscillation resonant sidla kuya arc Welding, ngokudlula epholisayo kanye lekhoyili.
Ungakhohlwa ukuthi idivaysi ukukhiya kubangela capacitor odlulayo therethrough a wamanje imvamisa high, lapho amagugu voltage ziphezulu. Ngenxa ukumelana ne wamanje Ukuvinjwa capacitor oscillator ivikelwe izifunda okufutshane.
Ukuze wenze oscillator mathupha, uzodinga a transformer ephezulu voltage. Yena liyadingeka ukwandisa voltage. Futhi, ningawenzi phelisa izinkinobho phezu ukufudumala. It ukhonza njengelungu umlomo wombhobho igesi asinikeza noketshezi olungenambala olusegazini-arc, futhi ukulawula annealing. Konke lokhu kuvimbela metal nokusondelana umoya-mpilo futhi ivumela kwakhiwa argon imvelo lapho Welding senzeka ngqo futhi inqubo metal.
Inqubo esebenza kanje. Ngemva ngokucindezela ukulawula izibani inkinobho discharger edonsa ishayela imvamisa. Ukuze lihlangabezana ephezulu voltage transformer ekhona. Kakhulu kazibuthe wakheka ngokusebenzisa i-arc, bese iguqulwe ngokusebenzisa kwekhoyili. Lesi sakamuva kuveza emazombezombe esiku Welding ikhebula.
Lo mklamo has okukhiphayo ezimbili - plus futhi lokususa. Bobabili idlule transformer. Nokho, okokuqala ivuliwe sikaphalafini, kodwa yesibili - ku workpiece. Ngemva ngokucindezela igesi inkinobho yokulawula kugeleza valve ukuze sikaphalafini. Lona ekuqaleni kwenqubo Welding. Futhi, noma iziphi oscillator, noma ngabe lilethwa ifektri noma ezenziwe ekhaya, kufanele abe capacitor.
Ngaphambi uthatha ukudizayina oscillator ngoba Welding umsebenzi ngezandla zabo, kufanele ufunde kusengaphambili nge imidwebo mklamo wakhe. Ephambi kwezinduna ngisho noma benolwazi oluyisisekelo emkhakheni Ihluzo Elingafaki Ukuqoka ke ngeke izinkinga. Ngaphezu kwalokho, efiselekayo design isipiliyoni. Ukwenza umkhiqizo oscillator ngokuzimela, kufanele sikhumbule ukuthi kubalulekile ukugcina siphephe. Njengoba kukhona ingozi yokuthi umuntu abanjwe ugesi.
Ukuze ukushisela izingxenye ikakhulukazi aluminium, kungenziwa ekhiqizwa Welding oscillator izandla zami siqu. Ukuze ukufakwa sebenzise ezisetshenziswa kakhulu izikimu:
Isinyathelo sokuqala ukuba ukhethe transformer okunokwethenjelwa ukuze inikeze anda supply voltage kusukela okuzisholo 220 V ukuze 3000 V
Ngemva kwalokho, ukufakwa arrester, ube yinhlansi permeable.
Ngaphezu kwalokho, exhunywe kwi element ngayinye ebalulekile - the ivimbela wesifunda oscillating nge epholisayo, odala high-imvamisa pulses.
Yilokho, le oscillator usulungile. Ingxenye eyinhloko phezu kwengungu kule divayisi kuyinto wesifunda oscillating. Uma sibheka ukwakheka kwazo zayo kufanele kube khona dlula capacitor. Isifunda oscillation, okuyinto sihlanganisa ikhoyili inductance kanye igebe inhlansi, kubalulekile ukukhiqiza pulses. Ngosizo lwabo, le arc Welding ephakamayo lula kakhulu.
Uthengwe khona noma ezenziwe ngezandla zabo le oscillator kungenziwa pulsed noma eqhubekayo. Kodwa inketho yokugcina lingaphansi ngempumelelo. Ngaphezu kwalokho, kuyodingeka babe kumadivayisi angeziwe kudingekile ukuvikela voltage ezinkulu.
Ngakho, uma uhlela ukusebenzisa idivayisi kuphela ekhaya, kungcono ukwenza oscillator ngoba Welding ngezandla zakhe, njengoba ukuthengwa yakhe umenzi kanye izindleko nomthengisi eqolo. Phezu kwale nhlangano kufanele abe namakhono futhi ulwazi kumadivayisi ezifana imishini kagesi.
Uma uhlose ukwenza oscillator ngezandla yakho, udinga ukuba banake kuphela inhlangano efanele, kodwa futhi ukusetshenziswa ngemfanelo kule divayisi. Ngemva idivayisi ifakwa amandla kagesi. Futhi-non-ukuhambisana yokuphepha ingozi yokulimala. Kufanele asondele ngokucophelela inhlangano yabantwana izifunda kagesi futhi usebenzise kuphela labo izingxenye ezifaneleke ngokugcwele izici. Uma ulandela yonke ezenziwe oscillator ingeyakho, ngeke kube nzima kakhulu. Udinga nje kuphela amathuluzi adingekayo kanye izinto.
Thermal ifilimu ingcina: indlela yokusebenzisa kahle
Delicious nokunye okufana nokolweni isobho nge meatballs
I-endometriosis. Ukwelashwa futhi Izimpawu
Umlingisi Pavel Vishnyakov - Biography nama-movie